IBamba leMenenja yakwa-Student Governance and Leadership Development, uMnu Muzomuhle Mhlongo, lithe: ‘Ngenkathi uqala lo mcimbi kwakungowe-Student Representative Council (i-SRC) futhi sasisendaweni emumatha abantu abeqe kancane kuma-40’. Manje usubungaza abaholi bamaqembu nemibutho, abama-House Committee, nabezinhlangano zezemidlalo.
Bevile kuma-200 abafundi abangaholi baseKZN asebethweswe iziqu kanti bonke baphiwe izipho. Uphiko lwase-Westville lunconyiwe ngokukhiqiza abafundi abaningi, kwathi uphiko lwase-Edgewood lwanconywa ngokuba nabafundi abangabaholi abaningi be-SRC abethweswe iziqu.
ULaka-Mathebula uthe kuyamjabulisa ukubungaza abafundi abangabaholi. Uthe kuyinto enzima. ‘NgesiPedi kuthiwa “Phiri e mekoka mebedi e phatloga noka” okusho ukuthi labo abamiqondomibili abaphumeleli, kodwa nina nikuphikisile lokho’. Ukhuthaze abafundi, njengabaholi bangomuso ukuthi baqhubeke nokusebenzisa isikhahti sabo ukwenza ngcono isimo sezwe. ‘Singabaholi base-UKZN asiqhubeke sihole.’
UmQondisi omKhulu Kwezobudlelwano, uMnu Ashton Bodrick, uthe uyaziqhayisa ngabafundi abangabaholi. ‘Akulula ukuhola, uphumelele kanyekanye kodwa nibe yisibonelo esihle esihlale siphakamisa igama leNyuvesi.’ Wengeze ukuthi lokhu kuwumsebenzi wakhe oseqhulwini njengomQondisi omKhulu Kwezobudlelwano.‘Ngiyohlale ngiwukhumbula lo mcimbi kanti ngikhuthazeke kakhulu ukuthi ngixoxele indodakazi yami, efunda umatikuletshini, ngezinto ezenzeka lapha,’ kuqhuba yena.
Sesiphetha isiKhulu se-SRC seziNdaba zezeNhlalo, uMnu Mthunzi Maphumulo, sibonge abahleli bomcimbi, sathi sethemba ukuthi sizokwanda isibalo sabafundi abethweswa iziqu minyaka yonke.
Amagama: ngu-Hlengiwe Precious Khwela